जीवन उकास्दै मध्यपहाडी राजमार्ग
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ - दैलेख साततलाका रमेश थापाको तरकारी खेती निकै फस्टाएको छ । १ वर्षदेखि उनी पूर्ण रूपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन् । आफ्नै गाउँछेउबाट मध्यपहाडी राजमार्ग खोलिएपछि तरकारी बेच्न उनले टाढा जानु नपर्ने भएको छ । यसले पनि उनलाई तरीकारी खेतीमा लाग्न हौस्याएको छ, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘टाढा जान पर्दैन, गाउँमै गाडी आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘अरु खेती गर्दा वर्ष दिन खानै पुग्दैन थियो, तरकारी खेती गर्न थालेपछि नगद कमाई हुन थालेको छ ।’ उनी अब पूरै खेतमा तरीकारी लगाउने सोचाईमा छन् ।
उनको घर नजिकको सहर राकम कर्णाली हो । राजमार्ग खुलेपछि अब यहाँसम्म पुग्न सजिलो भएको छ । सजिलो बाटो भएपछि आफ्ना उत्पादन बेच्न पनि गाह्रो छैन । मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहरमध्ये राकम कर्णाली एक हो । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणासँगै नयाँ सहरमा व्यापार र अन्य प्रयोजनका लागि बसाई सर्ने क्रम सुरु भएको छ । प्रत्येक दिन राजमार्ग छेउछाउमा पसल थापेर सानातिना व्यवसाय गर्नेको संख्या बढो छ । चिया, तरकारी पसलेले राजमार्ग छेउछाउका मानिसको जीवनस्तर उकासिक थालेको छ ।
पाँचथरको चियोभन्ज्याङ (नेपाल(भारत सीमा) देखि बैतडीको झुलाघाट (महाकाली नदी) जोड्ने सडक निर्माणसँगै गाउँमा विकास पूर्वाधार आइपुग्ने आशा स्थानीयको छ । पहाडै पहाड हुँदै पूर्व(पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी मार्ग पूर्वको अन्तिम विन्दु पाँचथर च्याङथापुको भारतीय सीमावर्ती चिवा भन्याङसम्म जोडिएको छ । च्याङथापुदेखि पश्चिम झुलाघाट जोड्ने १ हजार ७ सय ५६ किलोमिटरको क्षेत्रमा ट्रयाक जोडिसकेकाले यातायात सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसमध्ये नुवाकोटको पाटी भज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको १ हजार ९७ किमि पश्चिम खण्डमा पर्छ, भने ६ सय ५९ किलोमिटर पूर्वी खण्डमा पर्छ ।
१० वर्षसम्म बिजुली नआएपछि पोलमा टौवा
वामदेव गौतमलाई तीन अधिकार प्रस्ताव
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : नेकपालाई फाइदै फाइदा
यी हुन् चर्चित १० हलिउड फिल्म [सूचीसहित]
वामदेव गौतमको खुलासा : ओली र प्रचण्डले अब प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भन्नुभएको हो [अन्तर्वार्ता]
नेपाल रुपान्तरणका आयाम : कसरी साकार पार्ने समृद्धिको सपना ?
आर्यघाटमा शवको मोलमोलाइ !
अस्वस्थ कार्यकारी प्रमुख : संकटग्रस्त राष्ट्रिय राजनीति, व्यवस्थामाथि नै खतरा !
देशको अग्रणी लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसमा भद्रगोल !
सागमा नेपाली खेलाडीले बालेको आशाको दियो
जनता दिक्क, कर्णाली सरकारलाई झोला बाँड्न ठिक्क
विप्लव नेकपाका जिल्ला इन्चार्जसहित दुई पक्राउ
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलद्वारा विभिन्न आयोजनाको निरीक्षण, समयमै पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले समन्वय गर्नुपर्ने
एकीकृत भूमि ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार
कतार एयरवेजले ए डिभिजन शहीद स्मारक लीग २०१९-२० प्रायोजन गर्ने
हिमपातले टिप्पर चिप्लिएर २ जनाको मृत्यु
विद्यार्थी घट्दा मिचिँदै सामुदायिक विद्यालयको जग्गा
कुमारीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने